Android Pie ၏ beta ကို BQ Aquaris X2 နှင့် X2 Pro တို့ရရှိသည် Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | Bq, Android ဗားရှင်း
ပြီးခဲ့သည့်မေလက BQ သည် Android ဖုန်းနှင့်ဖုန်းနှစ်လုံးကို operating system အဖြစ်တရားဝင်တင်ခဲ့သည်။ ဤမော်ဒယ်များမှာ Aquaris X2 နှင့် X2 Pro ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာဒီ operating system ရဲ့ version ရှိတယ်ဆိုတာကသူတို့ကိုအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အခြားမော်ဒယ်များထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ရန်တံခါးကိုပေးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားယင်း၏တင်ဆက်မှု၌သင်တို့ကိုပြောသည်အဖြစ်.
ဤရွေ့ကား, ပြီးသားစစ်မှန်တဲ့လာမယ့်အရာတစ်ခုခုသည် Android Pie beta ကိုဒီ BQ Aquaris X2 နှင့် X2 Pro များအတွက်ဖြန့်ချိထားပြီးဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည် သုံးစွဲသူများသည်ဤ beta ကိုဖုန်းများမှလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်ဤဖုန်းများမှအသုံးပြုသူများသည် operating system ဗားရှင်းအသစ်၏သတင်းများအားလုံးကိုစက်ပစ္စည်းများအားလုံးသို့တရားဝင်မရောက်ရှိမီစမ်းသပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထုံးစံအတိုင်း beta program မှာ တချို့ bug တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပြproblemsနာများ။
BQ Aquaris X2 နှင့် X2 Pro တို့သည်နှစ်နှစ်အာမခံချက်အသစ်များရှိသည်Android One ဖုန်းတွေအားလုံးလိုပဲ။ စုစုပေါင်းသုံးနှစ်လုံခြုံရေးမွမ်းမံမှုများရှိခြင်းအပြင် ယခုအချိန်တွင်ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းများအတွက်ပထမဆုံး update ကိုလာတော့မည်။ ကမရှိတော့အများအားဖြင့်စပိန်ကြောင်းကို.
ဤ BQ Aquaris X2 (သို့) X2 Pro ရှိသူများသည် beta ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီ Android ဗားရှင်းအသစ်ကသင့်ကိုဖုန်းထဲကနေထွက်ခွာသွားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးစမ်းကြည့်နိုင်တယ် နောက်ဆုံးဗားရှင်းရက်စွဲအကြောင်း ၎င်းကိုဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီးယခုအချိန်အထိဘာမျှမပြောရသေးပါ။
သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီမော်ဒယ်သစ်တွေက Android Pie ကိုကူညီတာပေါ့ အနည်းငယ်ကြီးထွားလာရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် operating system ၏လတ်တလောဗားရှင်းသည်နောက်ဆုံးဖြန့်ဖြူးသောဒေတာတွင်မရှိသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေသောသတင်းဆိုး။ ယခုအချိန်တွင် BQ Aquaris X2 နှင့် X2 Pro အသုံးပြုသူများသည်ဤ beta ကိုခံစားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Bq » Android Pie beta သည် BQ Aquaris X2 Pro နှင့် Aquaris X2 တို့အတွက်ဖြစ်သည်